Landa i-Boeing 727-200 Advanced FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 62.8 MB
Play 51 615
Umbhali: Thomas Ruth, buyekeza nge-BK
Kubuyekeziwe on 06 / 03 / 2018: I-GPWS eyengeziwe, i-Panel.cfg eguquliwe esuka ku-German kuya kwisiNgisi, izimbungulu ezincane ezihleliwe, zengeze ukusebenza kwe-727, izinqubo nokulinganiselwa PDF kufolda yedokhumenti.
Kubuyekeziwe on 04 / 09 / 2017: Manje iyahambelana Prepar3D I-v4, inguqulo ye-Auto-ukufaka i-10, i-modical flying modics, amaqiniso angaphezulu, ukusetshenziswa kwamafutha kunengqondo ngokwengeziwe, imisindo eyengeziwe yangokwezifiso, radar sezulu yesimo sezulu esingajwayelekile.
I-Boeing 727-200 (Pax neFreight) uhlobo lwendabuko oluthuthukisiwe lwe FSX I-SP2 kanye nokushesha. Iza nephaneli ye-2D ne-cockpit ebonakalayo kanye ne-FMC eyodwa esebenza! Kubandakanya ukubuyiswa okubili: iPacific Air Express eflp ADVA RSBK (INS) ne-HAPAG (FMC). yabadlali abaningi abahambisanayo ngokwakhona. Kubandakanya nokubuyekezwa okuningi. Funda bhukwana.
I Boeing 727 kwaba isikhathi eside kakhulu, emhlabeni wonke le nkampani ethandwa kakhulu. I 727 landizela ngokokuqala ngqá ngo 1963.
Umtlamo 727 kwaba umphumela ukusilela phakathi Lufthansa, American Airlines and Eastern Airlines on ukucushwa kwe-owalandela ukuze Boeing 707. Lufthansa nalandela umlando ayefuna kubhalwe ezine izindiza zayo ukuze zezindiza at eziphakeme, ikakhulukazi Izikhumulo yayo Stapleton International Airport. American Airlines wayefuna indiza twin-engine ukuze umsebenzi uhambe kahle izizathu. Eastern Airlines wayenethemba lokuthi ngenxa injini yesithathu izindiza zayo olwandle iCaribbean. Ekugcineni, izindiza ezintathu bavumelana trijet. Yavela kanjalo-ke 727.